ရှမ်းဂိမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး သော Online multiplayer card game ဖြစ်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်စွာ ကစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ♣♣♣ ♣♣♣
Play now on any Browser
Play Online iOS Download for Android
Game စတင်ကစားရန် အတွက်
Android : Google Play Store တွင် လည်း download ရယူနိုင်ပါသည်။
IOS : Browser တွင် http://play.shankoemee.com/ လို့ရိုက်ထည့်ပြီး ၀င်ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါသည်။
အကောင့်ဖွင့်ရာတွင် login with facebook သို့မဟုတ် Create Account ဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာရွေးချယ်ဝင် ရောက်နိုင်သည် ။
Game ပထမစာမျက်နှာတွင် အခန်းရွေးချယ်နိုင်ရန် ဘယ် ၊ ညာ ရွေ့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Play Now ကိုနှိပ်လျှင် sever မှ ရွေးခြယ်ပေးသောအခန်းတွင်ဝင်ရောက်ကစားရမှာဖြစ်ပြီး ၊
မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လိုလျှင် Beginner မှစပြီး ဘဏ်ကိုင်နိုင်သည့်ပမာဏပေါ်မူတည်ကာ Master အထိ အခန်းရွေးချယ်ကစားနိုင်သည်။
၀ိုင်းတစ်ဝိုင်း တွင် ကစားသမား ၈ယောက် ကစားနိုင်သည် ။
ကစားဝိုင်းထဲစတင်ဝင်ရောက်ချိန် ကစားဝိုင်းအတွင်းကစားလက်စဖြစ်နေလျှင်ခဏစောင့် ဆိုင်းပါပြီးလျှင်နေရာ လွတ်များတွင် အနီရောင်မြှားလေးပေါ်လာပါက ကလစ်နှိပ်ပြီးစတင်ကစားနိုင်ပြီဖြစ်သည် ။
အလျော်ရရန် ဘဏ်ကိုင်သူထက် မိမိဖဲက သာရပါမယ်။ အလျော်ရသူများကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်းပေးသွားပါမယ်။
ဖဲတန်ဖိုး (အပေါက်) အများဆုံး ရရှိသူများအား (အော်တို - ၂ ချပ် ဖြင့် ၉ ပေါက် (သို့) ၈ ပေါက်၊ ၃ ချပ် အက္ခရာတူ၊ ၉ ပေါက်၊ ၈ ပေါက် စသည်ဖြင့် မှ ဘူ အထိ အစဉ်အတိုင်း) ပေးလျော်ပါမယ်။
"ဖဲတန်ဖိုးချင်းတူနေပါက အချပ်နည်းသူကို (၂ ချပ် က ၃ ချပ် ကိုနိုင်) ဦးစားပေးပါမယ်။"
ဖဲတန်ဖိုး၊ အချပ်ရေချင်း တူနေပါက အကြီးဆုံး အချပ်ချင်း ယှဉ်ရပါမယ်။
အက္ခရာ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် အစီအစဉ်မှာ A K Q J 1098765432 အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အပွင့် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် အစီအစဉ်မှာ စပိတ်၊ အသည်း၊ ဒေါင့်၊ ညင်း အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အက္ခရာ နှင့် အပွင့် ပေါင်းပြီး အချပ်အလိုက် ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် စီလျင် စပိတ် A မှာအကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး၊ ညင်း2မှာအသေးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
၂ ချပ် အပွင့်တူလျင် ၂ ဆ ရပါမယ်။၃ ချပ် အပွင့်တူလျင် ၃ ဆ ရပါမယ်။
၃ ချပ် အက္ခရာတူ လျင် ၅ ဆ ရပါမယ်။ (ဥပမာ AAA, KKK, 444, 222, အော်တို - ၂ ချပ် ဖြင့် ၉ ပေါက် (သို့) ၈ ပေါက် ကိုလျော် ပြီးပါက ၅ ဆ ကိုလျော်ပါမယ်)
JQK အပွင့်မတူဘူး ဆိုရင် ဆ မပေးပါ။ အဲ့ဒါ ဘူပါ။
နှစ်လုံးပူး (44, 99) အပွင့်မတူဘူး ဆိုရင်လည်း ဆ မပေးပါ။
ဒိုင်အနေဖြင့် ဖဲ အသက် ၃ မပြည့်ပါက အားလုံးကိုလျော်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ထိုးသား အနေဖြင့် ဖဲ အသက် ၃ မပြည့်ပါက အလျော်မရ ပဲ အစားခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဏ်တွင်ကျန်သော Credit ပမာဏ သုညဖြစ်သည်အထိသာ လျော်ပေးပါမယ်။
ဒိုင်၏အလျော်အစားမှာလည်း အထက်ပါအတိုင်း ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုင်ကိုင်ရန် အနည်းဆုံးပမာဏ မှာ ၀ိုင်းအလိုက် ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။
မိမိလက်ရှိဝိုင်းတွင် မိမိနောက်ဆုံး ဒိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောအချိန်၊ Credit လုံလောက်မှုတို့ပေါ်မှုတည်ကာ သင့်တော်သူအား အလိုအလျောက် ဒိုင်အဖြစ်ရွေးချယ်သွားပါမယ်။
မိမိစတင် ဒိုင်ကိုင်သော ပမာဏ၏ ၃ ဆ ရရှိပါက Warning အလိုအလျောက် ခေါ်ဆိုပေးပါမယ်။
Warning စတင်ခေါ်သည်မှ ၃ ကြိမ်ပြီးပါက (သို့) ဘဏ်တွင် Credit မကျန်တော့ပါက မိမိဘဏ်အလှည့်ပြီးဆုံးပါမယ်။
ဒိုင်နေဖြင့် ၃ ချပ် အိမ်များကို အရင် ဖမ်းနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ အရင် ဖမ်းသူကို အရင်မလျော်ပါ။ အလျော်အစား ဥပဒေအတိုင်းသာ ဖဲတန်းဖိုးအလိုက် အစီအစဉ်အတိုင်းလျော်ပါမယ်။
ဒိုင်အလှည့်ပြီးဆုံးချိန်တွင် ဘဏ်ကျန်ငွေ ၁ သိန်းကျော်ပါက ၁၀% ကောက်ခံပါမည်။
အကောင့်အသစ်ဖြင့်စတင်ကစားလျှင် shan credit ၁၀,၀၀၀ နှင့် စိန် ၁၀ လုံးရရှိပါမည်။
သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း မထိုးပါက မိမိလက်ရှိဝိုင်း၏ အနည်းဆုံးပမာဏကို အလိုအလျောက်ထိုးပေးပါမယ်။
သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ထိုးခြင်း၊ ဆွဲ (သို့) ရပ်ခြင်းတို့ကို ဆက်တိုက် မပြုလုပ်ပါက ၀ိုင်းထဲမှ အလိုအလျေက် ထုတ်ပယ်ပါမည်။
နေ့စဉ်ဆု (Daily Reward) ကို Rank(ရာထူး)အလိုက် WHEEL OF FORTUNE လှည့်ခွင့်ရှိမည် ။ Wheel လှည့်ရာတွင် ၁ ထောင် မှ ၁၀ သိန်းအထိ ကျပန်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ဂိမ်းအတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ Facebook တွင်ဖြစ်စေ၊ Player အချင်းချင်း ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဆဲဆိုခြင်း၊ နစ်နာအောင်ပြောဆိုခြင်း၊ အခြား မိသားစုဝင်များအား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် လုပ်ရပ်များပြုလုပ်ခြင်း၊ မိသားစုဝင်အချင်း သွေးကွဲအောင် ပြောဆိုရေးသားခြင်း၊ သတင်းမှားများ ပေးပို့ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ မြန်မာဂိမ်းအဖွဲ့မှ အသိအမှတ်မပြုသော လင့်များ၊ ပုံများ ပေးပို့ရေးသားခြင်း တို့ ပြုလုပ်ပါက သတိပေးခြင်း (သို့) Ban လုပ်ပါမယ်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် ကစားခန်း တစ်ခန်းထက်ပိုကာ ဝင်ကစားခြင်းကို လက်မခံပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက နောက်ဆုံးကစားသော အခန်းကိုသာ အတည်ယူမည်ဖြစ်ပြီး အခြားအခန်းများတွင်ကစားနေခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ကာ အခန်းတွင်းမှထုတ်ပစ်ပါမယ်။ ပိုက်ဆံ ပျောက်ခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်းများလည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ အတွက် တစ်ချိန်တည်းတွင် အခန်း တစ်ခန်းထက်ပိုကာ မကစားသင့်ပါ။
မြန်မာဂိမ်း Admin များမှ မိသားစုဝင်များပျော်ရွင် အဆင်ပြေစေရေးကိုဦးတည်ကာ ကူညီရန် အသင့်ရှိနေပါတယ်။ သို့သော်လည်း အချို့သောသူများက ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူကာ မဟုတ်မမှန်သော သတင်းများ၊ လိမ်လည်မှုများပြုလုပ်လာတာကြောင့် အလုပ်ပိုရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မဟုတ်မမှန်ပဲ အကြောင်းကြားရင် အရေးယူပါမယ်။
အခက်အခဲကို သတင်းပေးပို့ရာတွင်လည်း အခန်း + ပွဲစဉ် + အချိန် တွေကို တတ်နိုင်သလောက် မှန်ကန်အောင် ပေးပို့စေချင်ပါတယ်။ သို့မှသာ အက်မင်များလည်း ထိထိရောက်ရောက် ကူညီပေးနိုင်မှာမို့ အခန်း + ပွဲစဉ် + အချိန် လေးတွေကို မှတ်သားထားပေးဖို့ အထူး မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိရန် : https://www.facebook.com/ShanKoeMee/?ref=settings ထဲရှိ message box တွင် အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါသည် ။
Credit or Diamond ၀ယ်ယူရန်အတွက် Gcoin အလုံအလောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ Gcoin ၀ယ်ယူရန်အတွက် Game ထဲရှိ Top Up ထဲသို့ဝင်ရောက်ပါ ။
လိုခြင်သော Credit or Diamond ပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ ။
Gcoin လုံလောက်မှုရှိလျှင် confirm နှိပ်ပြီး ရယူနိုင်သည် ။ လိုအပ်သော credit ပမာဏနှင့် ပြောင်းလဲရန် gcoin လုံလောက်မှုမရှိပါက အပေါ်ဖက်ညာဖက်ဒေါင့်ရှိ Top Up ထဲသို့ထပ်ဝင်ပါ။
Card Top Up ကိုရွေးချယ်ပါက Myanmar Game Card (သို့မဟုတ်) Red dot Pay PIN ဖြင့် မိမိ နှစ်သက်ရာတစ်မျိုးမျိုးရွေးချယ်ပြီး သတ်ဆိုင်ရာ code နံပါတ်ဖြည့်သွင်းဝယ်ယူနိုင်သည်။ Myanmar Game Card ကိုရွေးချယ်ပါက Top Up ထဲရှိ Resellers ဆိုင်များတွင် Myanmar game ငွေဖြည့်ကဒ်ဝယ်ယူဖြည့်သွင်းနိုင်သည်။ Red dot Pay PIN ကို ရွေးချယ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ red dot ဆိုင်များတွင် Pay PIN Code ၀ယ်ယူဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
SMS ဖြင့်ဝယ်ယူရန်အတွက် Top up ထဲရှိ SMS ကို ရွေးချယ်ပါ ၊ မိမိလိုခြင်သော gcoin ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ ၊ အောက်ဖက်နားတွင် copy ခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ ၊ Phone message သို့သွားကာ Past လုပ်ပြီး Mpt message နံပါတ် 8605 သို့ Message ပို့ပြီးဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ (Mpt ဖြင့်သာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မည်)
Online မှ ၀ယ်ရန်အတွက် Pay Pal အကောင့်ရှိရန်လိုအပ်ပါသည် ။ Top UP ထဲရှိ Online ကိုရွေးချယ်ပါ ။ မိမိလိုအပ်သော Ammont ကိုရွေးချယ်ပါ ၊ Pay Pal အကောင့် ရိုက်ထည့်ပြီး ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည် ။
Gcoin ရရှိပြီးပါက Credit or Diamond ပြန်ပြောင်းရန်လိုအပ်ပါသည် ။ ပြန်ပြောင်းရန်အတွက် Top Up ထဲဝင်ပြီး မိမိမှာရှိသော Gcoin ပမာဏနှင့်ကိုက်ညီသော Ammont ကိုရွေးချယ်ကာ confirm နှိပ်ပြီး Credit or Diamond အဖြစ်ပြောင်းလဲရရှိနိုင်ပါမည် ။
A Product of MyanmarGame.com. ©2016 StudioAMK Pte. Ltd.